Laba nooc oo Ellicott® ah ayaa loo isticmaalay isku darka si loo caawiyo fur kanaalka marinka galay Grand Traverse Harbor ee Michigan, mashruuc la dhammeeyay bishii Luulyo 2020.
Dekedda waxaa ku xirmay ciid shaanbare ah, qashin dhagax madow oo madow iyo madow oo haraaga oo ka haray howsha taariikhiga ah ee macdanta. Intii lagu gudajiray qarniyadii 19-aad iyo 20-aad, warshadleyda shaabadaysan ee Jasiiradda Keweenaw Peninsula waxay soo saareen 25 milyan oo tan oo qashin ah, oo si sharci ah loogu xareeyay agagaarka harada Lake Superior.
Nabaad guurka iyo qulqulka sanadihii la soo dhaafay waxay sababeen in ciida shaabaddu ay si tartiib tartiib ah ugu sii durkato dhinaca koonfureed ee jasiiradda Gay, Michigan, taasoo abuureysa xeeb madow iyo xirmooyinka dekedda. Ciidda khatarta badan leh ee halista ah ayaa sidoo kale khatar gelisay nolosha biyaha ku nool aagga, oo ay ku jiraan kalluunka harada, waxayna u baahdeen in la faleebo.
Bishii Meey ee sanadka 2019, macaamiisha Ellicott ee loo yaqaan 'PCI Dredging' waxay bilaabeen inay ka saaraan ciidda shaambada iyagoo adeegsanaya Ellicott® Model 670-33 dredge iyo 5 bambooyin buuster ah illaa qaboobaha laga qaboojiyo, marka duufaanadu dib u buuxiyaan aagagga qodan.
The 670 Series waa mid la qaadi karo jeex jeex jeex jeexan madaxa taas oo si fudud loo raro loona ururiyo. Qulqulka noocani wuxuu ku habboon yahay milkiile kasta oo qoda ama hawlwadeenka doonaya inuu iibsado markab si fudud loo isticmaali karo. 670-ka waxaa sida caadiga ah loo isticmaalaa mashaariicda hagidda waxyar dekedaha, webiyada, iyo mashaariic biyo-mareennada dhulka hoostiisa ka socda.
Guga 2020, Newt Marine waxaa qandaraas hoosaad laga siiyay inay la qaadato shaqadooda Ellicott 1270 dredge iyo bamka xoojiya. Taxanaha 1270 waa marin biyood fara badan oo loo yaqaan 'cutterhead dredge' oo leh heerar wax soo saar aad u wanaagsan oo loogu talagalay qodidda qoto dheer ilaa 50 fuudh waxaana caadi ahaan loo isticmaalaa dekedda cabbirka dhexdhexaadka ah, dekedaha, wabiyada, iyo mashaariicda qodidda marin biyoodka gudaha.
Mashruuca ciidda ciida ee Michigan, oo ay maalgeliyeen Hay'adda Ilaalinta Deegaanka iyo Ciidanka Mareykanka ee Injineerada, ayaa la dhammaystiray bishii Luulyo.